Podcast: Ka dhigaya Sayniska Afrika Mid muuqda - AfricArXiv
Podcast: Ka dhigaya Sayniska Afrika Mid muuqda
Kooxda AfricArXiv waxay gacan ka geysteen qaybtii saddexaad ee Xeerka Fikirka, Podcast ku saabsan 'sofwareerka, injineernimada, cilmi baarista iyo wixii u dhexeeya' oo ay abuureen Peter Schmidt oo ka mid ah Bulshada Cilmi-baarista Barnaamijka Cilmi-baarista.
Soo ogow sida AfricArXiv ay u sameyneyso wax soo saar cilmi baaris gudaha iyo ku saabsan Afrika oo la arki karo iyada oo la adeegsanayo barnaamijkan 'podcast interactive'
In Sayniska Afrika laga dhigo mid muuqda
Daabaca ama u baaba'a cilmi baarayaasha iyo saynisyahannada. Intaas waxaa sii dheer in cilmi baarayaal badan iyo saynisyahano ka socda wadamada Afrika ay halgan ugu jiraan sidii shaqadooda loo daabici lahaa loona aqoonsan lahaa. Kooxda ku xeeran https://info.africarxiv.org AfricArXiv waxay u shaqeysaa si adag si ay taas wax uga qabato.
Waa kuwan dhowr xiriiriyeyaal oo lagu xusay dhacdadan waxaad u baahan kartaa inaad hubiso:
https://www.stm-assoc.org Ururka Caalamiga ah ee sayniska, tikniyoolajiyadda iyo daabacaadda caafimaadka
https://www.tcc-africa.org Xarunta Tababarka ee Xiriirka ee Afrika
https://peerreviewweek.wordpress.com Dib-u-eegista Asxaabaha Toddobaadlaha ah iyo sannadlaha ah ee isku xirka wada-hawlgalayaasha qaybta daabacaadda iyo dib u eegista asxaabta
https://www.sspnet.org Bulshada daabacaadda aqoonyahannada
http://openaccessweek.org Toddobaadka Helitaanka Furan
Ku saabsan Bulshada ee Cilmi-baarista Barnaamijka Cilmi-baarista
Jaamicadda Cilmi-baarista Software-ka ee Cilmi-baarista waxaa lagu aasaasay iyada oo la aaminsan yahay in adduunyada ku tiirsan barnaamijka ay tahay inay aqoonsato dadka horumarinaya. Hadafkeenu waa inaan dhisno jawi cilmi baaris oo aqoonsan doorka muhiimka ah ee barnaamijka cilmi-baarista. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kor u qaadno xirfadaha software-ka dhammaan cilmi baarista, si kor loogu qaado wadashaqeynta ka dhexeysa cilmi-baarayaasha iyo khabiirada softiweerka, iyo inaan taageerno abuurista dariiq xirfadeed tacliimeed oo loogu talagalay Injineerada Software Software Research
Categories:	WaraysiFuran Furanpodcast
Tags: daabacaaddaMuuqaal ahaan